State media: Mugabe to be buried next Sunday - World news
HARARE, Zimbabwe (AP) — Former Zimbabwe president Robert Mugabe is expected to be buried next Sunday, state media reported. Mugabe, an ex-guerrilla leader who became the southern African country's first leader following independence from white minority rule in 1980 and held on to power until he was forced to resign in 2017, died in Singapore on Friday.
A church member prays during the Sunday mass at the Roman Catholic Church in Harare, Zimbabwe, Sunday, Sept. 8, 2019, a church that Robert Mugabe regularly attended. Days of official mourning have begun in Zimbabwe for Robert Mugabe, who had become a national hero despite decades of rule that left the country struggling. Mugabe, an ex-guerrilla chief who took power in 1980 when Zimbabwe shook off white minority rule and presided for decades while economic turmoil and human rights violations eroded its early promise, died Friday at a hospital in Singapore.
Zimbabwean women and girls wash their clothes next to a lake on the outskirts of the capital Harare, Zimbabwe Sunday, Sept. 8, 2019. Former president Robert Mugabe, who enjoyed strong backing from Zimbabwe's people after taking over in 1980 but whose support waned following decades of repression, economic mismanagement and allegations of election-rigging, is expected to be buried next Sunday, state media reported.
Zimbabweans wash their clothes next to a lake on the outskirts of the capital Harare, Zimbabwe Sunday, Sept. 8, 2019. Former president Robert Mugabe, who enjoyed strong backing from Zimbabwe's people after taking over in 1980 but whose support waned following decades of repression, economic mismanagement and allegations of election-rigging, is expected to be buried next Sunday, state media reported.
A preacher reads from the Bible to people as they sit on top of a large rock on the outskirts of Harare, Zimbabwe Sunday, Sept. 8, 2019. Former president Robert Mugabe, who enjoyed strong backing from Zimbabwe's people after taking over in 1980 but whose support waned following decades of repression, economic mismanagement and allegations of election-rigging, is expected to be buried next Sunday, state media reported.
Zimbabweans sit and pray on top of a large rock on the outskirts of Harare, Zimbabwe Sunday, Sept. 8, 2019. Former president Robert Mugabe, who enjoyed strong backing from Zimbabwe's people after taking over in 1980 but whose support waned following decades of repression, economic mismanagement and allegations of election-rigging, is expected to be buried next Sunday, state media reported.
People buy goods from a street vendor near a newspaper banner in Harare, Sunday, Sept, 8 2019. Days of official mourning have begun in Zimbabwe for Robert Mugabe, who had become a national hero despite decades of rule that left the country struggling. Mugabe, an ex-guerrilla chief who took power in 1980 when Zimbabwe shook off white minority rule and presided for decades while economic turmoil and human rights violations eroded its early promise, died Friday at a hospital in Singapore.
Members of a small church group sing and worship on a hill in Harare, Sunday, Sept. 8, 2019. Days of official mourning have begun in Zimbabwe for Robert Mugabe, who had become a national hero despite decades of rule that left the country struggling. Mugabe, an ex-guerrilla chief who took power in 1980 when Zimbabwe shook off white minority rule and presided for decades while economic turmoil and human rights violations eroded its early promise, died Friday at a hospital in Singapore.
A Zimbabwean woman shares a joke with a friend as they wash their clothes next to a lake on the outskirts of the capital Harare, Zimbabwe Sunday, Sept. 8, 2019. Former president Robert Mugabe, who enjoyed strong backing from Zimbabwe's people after taking over in 1980 but whose support waned following decades of repression, economic mismanagement and allegations of election-rigging, is expected to be buried next Sunday, state media reported.
Father Richard Mushuku speaks during the Sunday mass at the Roman Catholic Church in Harare, Zimbabwe, Sunday, Sept. 8, 2019, a church that Robert Mugabe regularly attended. Days of official mourning have begun in Zimbabwe for Robert Mugabe, who had become a national hero despite decades of rule that left the country struggling. Mugabe, an ex-guerrilla chief who took power in 1980 when Zimbabwe shook off white minority rule and presided for decades while economic turmoil and human rights violations eroded its early promise, died Friday at a hospital in Singapore.
Church members sing during the Sunday mass at the Roman Catholic Church in Harare, Zimbabwe, Sunday, Sept. 8, 2019, a church that Robert Mugabe regularly attended. Days of official mourning have begun in Zimbabwe for Robert Mugabe, who had become a national hero despite decades of rule that left the country struggling. Mugabe, an ex-guerrilla chief who took power in 1980 when Zimbabwe shook off white minority rule and presided for decades while economic turmoil and human rights violations eroded its early promise, died Friday at a hospital in Singapore.
The Sunday mass at the Roman Catholic Church in Harare, Zimbabwe, Sunday, Sept. 8, 2019, a church that Robert Mugabe regularly attended. Days of official mourning have begun in Zimbabwe for Robert Mugabe, who had become a national hero despite decades of rule that left the country struggling. Mugabe, an ex-guerrilla chief who took power in 1980 when Zimbabwe shook off white minority rule and presided for decades while economic turmoil and human rights violations eroded its early promise, died Friday at a hospital in Singapore.
His body will arrive in Zimbabwe on Wednesday, the Sunday Mail quoted presidential spokesman George Charamba as saying. Mugabe enjoyed strong backing from Zimbabwe's people after taking over in 1980 but that support waned following decades of repression, economic mismanagement and allegations of election-rigging.
In death, Mugabe received praise from his former political and military allies, who propped up his rule for close to four decades before forcing him out in 2017. "He died a very bitter man," family spokesman and nephew to Mugabe, Leo Mugabe told reporters at the family's rural home Saturday. "Imagine the people that are guarding you, that you trusted the most, turn against you.
At a Roman Catholic cathedral where Mugabe used to attend Mass, a priest on Sunday opened the church service by paying tribute to the former ruler and asking congregants to forgive him. "He did a lot of positive things for our country but not everything that he did was right. We should learn to forgive for all the wrongs he may have committed. May God grant him mercy," said Father Richard Mushuku.